Iphoyisa elisolwa ngokuthenga izinkabi livezele intatheli izinqe zalo | Scrolla Izindaba
Iphoyisa elisolwa ngokuthenga izinkabi livezele intatheli izinqe zalo
Ngonyaka odlule ngoMfumfu ngavaleleka nombulali uRosemary Ndlovu ngesikhathi umnyango okwakumele siphume kuwona ungafuni ukuvuleka enkantolo enkulu yaseGoli.
NgoLwesibili mhla ziyi-14 kuMandulo, cishe ngemuva konyaka, lo owayengusayitsheni emaphoyiseni ungivezele izinqe zakhe sekhefu enkantolo enkulu yase-Palmiridge ngesikhathi ebona ukuthi ngiyamqopha.
Ngemuva kokugoba ngakimi, ngihambe kancane ngaya kuye saba nengxoxo encane egalari yasenkantolo.
Ngesikhathi ngikhuluma naye, uRosemary ubonile ukuthi ngiyamqopha, okungimangazile uvele wagoba wangivezela izinqe zakhe wase ekhombisa ukumamatheka okukhulu ebusweni bakhe.
Bengifuna ukubona ukuthi uyakhumbula yini lolusuku sivalelekile egumbini sobabili enkantolo ephakeme yaseGoli.
“Wena, uhlezi ungilandela neh? kubuza uRosemary.
“Ngiyakukhumbula ngesikhathi icala lisaqulelwa enkantolo yase-Tembisa.”
“Yini inkinga yakho” ebuza ebe ehleka njengomuntu ongekho ecaleni lokubulala eliqulwayo.”
Ngemuva kwalokho, uhlale ebhokisini elindele ukuthi kuqhutshekwe okwesibili kuqulwe icala lakhe. Ubebuzwa ummeli ngobufakazi obulethwe ngofakazi abangama-56 asebethule ubufakazi ngaye.
Ngaleso sikhathi, uRosemary ubelokhu emamatheka ebhokisini njengoba ebebuzwa uhlobo lwemibuzo ikakhulukazi ekuseni.
Uvukwe ulaka ngesikhathi ijaji limkhumbuza ukuthi kumele aphendule kuphela uma ephendula lokho ofakazi abakhulume ngakho mayelana naye.
Amacala amaningi engike ngawalalela selokhu ngaqala, ngesikhathi kuqala icala likaRosemary Ndlovu, kunalento eyodwa evele igqame.
Uhlezi efika egqoke econsa, izinwele zakhe zilungisiwe futhi uhlezi ebukeka eqhakazile kanjalo nengaphandle lakhe.
URosemary waboshwa mhla ziyi-7 kuNdasa. Ngesikhathi evele enkantolo enkulu yase-Tembisa, icala likaNdlovu laya enkantolo ephakeme yaseGoli ngaphambi kokuba balibuyisele enkantolo yase-Palmiridge ephakeme, lapho kuqulwa khona icala lakhe.